वीरगंज नारायणि अस्पतालका डा.अशोक कुश्वाहा कमिसन खोर भएको भिडियो सार्वजनिक ! - Birgunj Sanjalवीरगंज नारायणि अस्पतालका डा.अशोक कुश्वाहा कमिसन खोर भएको भिडियो सार्वजनिक ! - Birgunj Sanjalवीरगंज नारायणि अस्पतालका डा.अशोक कुश्वाहा कमिसन खोर भएको भिडियो सार्वजनिक ! - Birgunj Sanjal
२ भाद्र २०७६, सोमबार १६:३१
वीरगन्ज।राहुल गूप्ता|वीरगंज नारायणि अस्पतालमा डाक्टरहरुको चरम लापरवाही बढेको पाइएको छ । डाक्टर अशोक कुश्वाहाले स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरु संग चेकजाचको नाममा खुलेयाम कमिसन खाएको प्रमाण फेला परेको छ ।
आइतवार नारायणि अस्पतालमा उपचार गराउन आएका एकजना सेवाग्राहीका अनुसार डा. कुश्वाहाले आफ्नो कमिसनको निम्ति गलत रिपोर्टमा बिरामीको उपचार गरेको प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २४ हरपुर बलुवा निवासी तारिक हुसेन आफ्नो छोरालाई ज्वरो आएकोले नारायणि अस्पतालमा उपचार गराउन आउदा डा. कुश्वाहाले नारायणि अस्पतालमा रहेको प्याथलोजीमा सेवाग्राहीलाइ नपठाई आफनो दलाल मार्फत कमिसन खाने चकरमा मा अम्बे प्याथलोजीमा सेवाग्राहीलाई पठाएका थिए ।
सेवाग्रही हुसेन आइतबार आफु अस्पताल इमेरजेन्सी वार्डमा आफ्नो अढाई बर्षको छोरा सदरा इमानको उपचार गराउन डा. अशोक कुशवाहा कहां पुगेका थिए । डा. कुशवाहाले छोराको खुन, पिसाब चेकप गराउन पुर्जीमा लेखी मा. अम्बे प्याथलोजीमा जान पठाएको बिरामीका बुवा हुसेनले वताए ।
आफु मा. अम्बे प्याथलोजी ल्याबमा पुग्दा एक-दुई मिन्ट मै छोराको खुन, पिसाबको चेकजांचको रिपोर्ट ल्याबका संचालक संजय पटेलले दिएको उनले वताए । उनले भने ‘सो रिपोर्ट ल्याएर डा. कुशवाहालाई देखाउदा छोरालाई टाइफाइड भएको वताउदै ओषधी लेखिदिनु भयो । तर त्यो रिपोर्टमा आफ्नो चित नबुझे पछि पुनः नारायाणी अस्पतालको ल्याबमा खुन, पिसाब चेकअप गराएको वताए । जुन रिपोर्ट अनुसार छोराई टाइफाईड भएको रहेनछ’ ।
दुबै रोपोर्ट लिएर डा. कुशवाहा कहां पुनः पुग्दा उहांले हला नगर्नुस मैले खुन पिसाबको चेकअप वापतको रकम फिर्ता गराई दिने भनेको वताए । त्यसपछि डा. कुशवाहले पुर्जी मै लेखि दिएको अधारमा मा. अम्बे प्याथलोजी ल्याबवाला कहां मैले तिरेको रु ११ सय फिर्ता गरिदिएको सेवाग्रही हुसेनले वताए ।
औषधी समेत खरिद गरि सकेका बिरामी बालकका बुवा हुसेनले भने ‘डाक्टर साहबहरु माथी कसरी विश्वास गर्ने, विहान १० बजे छोराको उपचारको लागि अस्पताल पुगे पनि साझ ४ बजी सक्यो उपचार भएन । खुन, पिसाबको रिपोर्ट नै फरक फरक आएको रहेछ, कुन रिपोर्टलाई सही मान्ने र कुनलाई गलत छुट्याउनै ग्राहोे भयो’ ।
बुझनु पर्ने कुरा त यो छ, डाक्टर साहबले नारायणी अस्पतालमा प्याथलोजी ल्याब हुदा हुदा पनि बाहिरको निजी ल्याबमा खुन, पिसाब चेकअपको लागि किन पेठाउनु भयो ? अस्पताल बाहिर पठाउनुको पिछे कमिशनको लोभ रहेको प्रष्ट नै छ । अक्रो कुरा ठिक छ डाक्टर साहेबले बाहिर पठाउनु भयो तर रिपोर्ट नै दुईटा फरक फरक आए पछि फेरी अक्रो ल्याबमा बिरामीको खुन, पिसाब चेकअप गराउनु पर्ने थियो ।
तेस्रो ठाउँमा चेकअपको रिपोर्ट आइसकेपछि कसको रिपोर्ट गलत र कसको सही थाह हुने थियो । तर त्यस्तो उहांले गर्नु भएन त्यसले डाक्टर साहबको ल्याबवाला संगको मिलोमतो प्रमाणि भएको र उहांले ल्याबको बचाउ गर्नु भएको अस्पतालमा जम्मा भएको सेवाग्राहीको आरोप समेत थियो ।
अक्रो कुरा सेवाग्राही हुसेनले छोराको खुन, पिसाब दुई ठाउँमा नदेखाएको भए डाक्टरको मिलोमतोमा हुने प्याथलोजी ल्याबवालाहरुको करतुत थाह हुने थिएन । रिपोर्ट नै फरक फरक आए पछि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य संग खेलवाड भएको बारे पनि प्रष्ट हुन्छ । डाक्टर अशोक कुश्वाहा के कति इमन्दार र के कति आफ्नो पेशा प्रति वफादार रहेको बारे यहि घटनाले प्रष्ट पार्दछ ।
तर तलदेखी माथिल्लो निकायसम्म कमिसनखोरीको चक्करमा आखामा तेल हालेर बसेका छन् । तराईको अधिकांश जिल्लाहरुबाट उपचार गराउन आउने सेवाग्राहीको जिउधनबाट खेलवाड गर्ने त्यस्ता प्याथोलोजी र त्यस्ता डाक्टरहरु माथि कारवाही हुन जरुरी देखिएको छ ।